प्रमलाई सुस्वास्थ्य सहित दिर्घायुकाे कामना - Vishwa News
भनिन्छ ‘कल्पना, तर्कना, संझना, झझल्काे ईत्यादिका कारण सपना देखिन्छ । तर यकिन गर्न सकिरहेकाे छैन कि बिदेशिएदेखि मैले कुन कारणले हाे एक रातमा कम्तिमा २/३ वटा अनेक खाले मिश्रित सपनाहरु देख्दै आइरहेकाे छु । अचम्म लाग्दाे कुरा त के लागिरहेकाे छ भने देखिएका लगभग सतप्रतिशत सपनाहरु जन्मभूमि नेपाल र नेपालीसंग सम्बन्धित नै देख्ने गरेकाे छु । परदेश छिरेकाे पनि लामै भै सक्याे सुख, दुःख, रमाइलाे, नरमाईलाे, संघर्ष, उतार, चडाब, आराेह, अवराेहकाे अनुभूति पनि अथाह संग्रहित भै सके । तर पनि ति अनूभूतिहरु सपनीमा आकलझुकल बाहेक छचल्किदैनन् । प्रतिबिम्बित हुदैनन् । याे मेराेलागि बडो साेचकाे बिषय बनिरहेकाे छ । यसै क्रममा गत फागुन १० गते राति देखेकाे सपना यहाँ सार्वजनिक गर्दैछु । जुन सपनीमा
स्वर्गबासी भाई ज्याेति तिमल्सिनालाई एकाएक भेटेकाे थिए ।
ज्याेति हेटाैडाबासीका लागि एक चिरपरिचित नाम हाे । जाे मुख्यतः सामाजिक कार्य क्षेत्रमा हाेमिएका थिए । राजनीति नगरे पनि एउटा सचेत नागरिकका हैसियतले आफ्नाे अधिकार र कर्तब्यप्रति सचेत थिए । देशमा पछिल्लाे राजनीतिक परिवर्तन (संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्र ) ल्याउनमा उनकाे पनि महत्वपूर्ण याेगदान छ । बिडम्बना आफ्नाे , सन्ततिकाे र समग्र नेपालीकाे उज्वल भविश्यकाे खातिर ०६३/६३ काे जनआन्दाेलनमा हाेमिएका उनले अल्पायु मै स्वर्गबास राेजे । अत्यन्त मिलनसार, कर्मयाेगी, समाजसेवी, पराेपकारी स्वर्गिय भाईलाई संझेर बेलाबखत यादिन्छु पनि । त्यसैकाे प्रतिबिम्ब पनि हुन सक्छ याे सपना । जे हाेस् अब सपनाकाे कुरा गराैं।
देशमा निकै ठुलाे आन्दाेलन मच्चिरहेकाे थियाे । दिनभर आन्दाेलनमा हाेमिएका हामी रात परेपछि फेरी हेटाैडाकाे मुख्य चाेक सिमा चाेकमा पुनः भेट्ने गरी खाना खान घरतिर लाग्याै । म हिडेर ५ मिनटकाे दुरीमा रहेकाे बसपार्क नजिक टिसियन स्थित घरकाे भान्सा भित्र छिर्दा नछिर्दै ज्याेति भाई हस्याङफस्याङ गर्दै आए र टर्च मागे । लाेडसेडिङका कारण चुक अमिलाे खनाए झै अन्धकार अध्याराे छाएकाे थियाे । मैले साेधे । किन ज्याेति ? के भयाे र ? उनले पछि भन्छु दाजु भन्दै टर्च यथासिघ्र उपलब्ध गराउन अनुराेध गरे । तत्काल घरमा खाेज्दा नभेटेपछि घरकाे पहिलाे तल्लामा रहेकाे पसलमा किन्न भनेर दुबै जना बिलम्ब नगरी तेश्राे तल्लाबाट एकैचाेटाे तल झर्याै । तल त सुरक्षा निकाय र आन्दाेलनकारी बिच ठुलाे मारामारी चलिरहेकाे पाे रहेछ । घरकाे च्यानल गेट भित्र धेरै आन्दाेलनकारीहरु सुरक्षाकाे आड लिदै चर्का चर्का नारा लगाई रहेका थिए । भिडका कारण छिचाेलेर टर्च लिन पसलसम्म पुग्नै सकिएन । अन्धकार अध्याराेका कारण कसैलाई चिन्न पनि सकिएन । त्यही हुलमुलमा मिसिएर स्वर मच्चाउन सुरु गर्याै हामीले पनि । यतिकैमा म बिउझिए । मुख सुकेकाले पानी पिए । देखेकाे सपना पुनः सबिस्तार स्मरण गर्ने प्रयास गरे । उठेर मुख धाेई स्वर्गबासी ज्याेति भाईलाई स्मरण गर्दै मृत आत्माकाे चीर शान्तिकाे कामना सहित पानी चढाए र हार्दिक श्रध्दासुमन अर्पण गरे । यस प्रसंगकाे पुनः स्मरणमा यिनै श्रद्धासुमनका शब्दहरु अर्पण गर्दै फेरी पनि मृत आत्माकाे चीर शान्तिकाे कामना सहित श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु ! मध्यरत भएका कारण पुनः निदाउने काेसिस गरे तर सकिन । झन उनीसंगकाे हिमचिम र उठबसकाे फिरिस्त याद आयाे । मेराे जीवनकाे एक महत्वपूर्ण ब्यक्तित्व भएका कारण हाेला आँखाले पनि आँसु झारेर हार्दिक श्रदासुमन अर्परण गर्याे । यस्तै यस्तैमा बित्याे त्याे रात ।
बिहान उठेर सामाजिक सञ्जाल खाेलेर हेर्दा त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको जन्मदिनकाे शुभकामना छ्यापछ्याप्ति भै सकेकाे रहेछ । देशकाे प्रमुख कार्यकारिणी पदधारी र नेपाली राजनितिमा चर्चा परिचर्चाकाे शिखरमा रहनु भएका एक ब्यक्तित्वकाे जन्मदिन परेकाले साेही देशकाे एक नागरिकका हैसियतले उहाँसंग बिभिन्न सैद्धान्तिक र ब्यवहारिक असहमति तथा असन्तुष्टि रहेका बिषयहरुलाई पछि बहसमा निरन्तरता दिने गरी तत्कलका लागि बिर्सिएर उहाँकाे सुख ,शान्ति,सुस्वास्थ्य , दिर्घायु र उत्तराेत्तर प्रगतिकाे कामना गरे । हुन त उहाँकाे जन्म दिनमा पनि अनेक खाले टिका टिप्पणी गरेर आफ्नाे असहमति, असन्तुष्टि र पिडा पाेख्ने जमातकाे कमि रहेन । अचानाकाे चाेट खुकुरीले बुझ्न सक्दैन भने झै उहाँहरुसंग पुर्ण असहमति जनाएर उहाँहरुकाे भावनाकाे अवमुल्यन पनि म गर्न चाहन्न । तर मानिसकाे जीवन चक्रमा जन्म,मृत्यु र कर्म चलेकाे दिन अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुने भएकाले यि दिनहरुमा मानवीय नाताले सम्बन्धित ब्यक्तिकाे सकेसम्म भलाे चिताएर सकारात्मक पक्षकाे निरन्तरताका लागि प्रसंसा सहितकाे उत्प्रेरणा र कम्जाेर पक्षकाे सुधारकाे अपेक्षा सहित सुझाबहरु दिदै स्मरण गर्नु मानव धर्म हाे । भलाे चिताउन सकिन्न वा इच्छा भएन भने पनि कुभलाे नचिताउनु वा पाप नचिताउनु पनि धर्म नै हाे । वर्तमान राजनितिक परिवर्तनलाई यदि उपब्धि मान्ने हाे भने प्रम केपी वलीकाे याेगदानलाई झाेक फेर्ने स्वार्थमा कदाचित अवमुल्यन वा नजरअन्दाज गर्नु हुदैन।विविध कारणले मनमा उब्जिएका कुण्ठा,पिडा वा असन्तुष्टिहरुलाई तत्कालका लागि थामथुम पारेर मन बुझाउन नेपालकाे राजनितिक परिवर्नका बिभिन्न कालखण्डहरुमा उहाँले खेल्नु भएकाे भूमिकाहरुलाई असहमतिका अनेक काेणबाट ब्याख्या तथा बिश्लेषण गर्न त सकिएला तर त्याे अल्पकालिन अदुरदर्शी साेच तथा बिश्राम मात्र हाे । दुरदर्शी साेच तथा समाधान पक्कै हैन । राजनितिक नेतृत्वका हिसाबले मुल्याङकन गर्दा २०६२/०६३ काे जनआन्दाेलन, शान्ति प्रक्रिया , त्यसपछि तत्कालिन माओवादीलाई लगाम लगाउनेदेखि माैका पाउदा एकले अर्काेकाे अस्तित्व समाप्त पार्ने अवस्थासम्म सम्बन्ध रहेकाे त्यही माओवादीसंग पार्टी एकता गरेर दुई तिहाईकाे सरकार गठन गरी पार्टी र सरकारकाे दुबैकाे बागडाेर आफ्नाे कब्जामा लिन सफल हुनुलाई कदाचित चानचुने साहस, याेग्यता र क्षमता ठान्नु हुदैन ।
नयाँ संबिधना निर्माण, जारी र कार्यान्वयनसम्म आईपुग्दा उहाँले खेल्नु भएकाे भूमिकाहरु परिवर्तनका हिमायतीहरुका लागि पुजनीय र प्रेरणादायी छन् नै । त्यतिमात्र हैन बिभिन्न कालखण्डमा राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता, स्वाधिनता, सार्वभाैमिकता,अखण्डताका सबालमा उहाँले लिनु भएकाे अडान र खेल्नु भएकाे महत्वपूर्ण भूमिका सराहनीय छन् । यिनै बिषेश र महत्वपूर्ण भूमिकाहरुकै कारण वलीले जनताकाे बिश्वास जित्न सफल हुनु भएकाे थियाे । त्यही जनताकाे बिश्वासका कारण आज उहाँ संबैधानिक ब्यवस्था अनुसार प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाटै देशकाे महत्वपूर्ण तथा सर्बाेच्च कार्यकारी पदमा आसीन हुनु भएकाे छ । र जनताले पनि बढी बिश्वास र भराेसा गरी पद, अधिकार र जिम्मेवारी दिलाएकाे ब्यक्तिबाट साेही अनुसार आशा र भराेसाकाे अपेक्षा गरेका हुन् । जाे स्वभाविक पनि हाे । वली ज्यू त नेपालकाे ईतिहासकै सबै भन्दा भाग्यमानी र शक्तिशाली प्रम हाे भन्दा अतियुक्ति नहाेला । आफ्नाे सर्वानुकुल राष्ट्रप्रमुख, आफ्नै वर्गकाे दुई तिहाई सरकार, त्यस माथि पनि लाेकतन्त्रकाे संबैधानिक साैन्दर्यमा मात्र सिमित रहेकाे सशक्त तर चीर निन्द्रामा परेकाे सालीनताकाे उपाधि स्वधारित प्रतिपक्ष काँग्रेस, ब्यवस्थाकाे साैन्दर्यकाे गरगहनाका रुपमा बेला बखत प्रदर्शित अन्य देशी बिदेशी बिराेधीहरु, विविध कारणले ‘बाेल बाेल माछा ‘मुखभरी पानी’ भने झै तैचुप मैचुपकाे अवस्थामा रहेका आफ्नै दलका नेताहरु, जुनसुकै अवस्थामा सुरक्षाकवचकाे भूमिका निर्वाह गर्ने र भक्तिगान गाएर नथाक्ने चेत अचेत कार्यकर्ताहरु, आफ्नाे निश्पक्ष र स्वतन्तर जिम्मेवारीबाट बिचलित स्वार्थी शक्तिका पूजारी राज्यका अंगहरु , पुर्पुराेमा हात राखेर आफ्नै भाग्यलाई दाेषी ठहराउने धर्य र सहनशील जनता रहेकाे अवस्थामा देशकाे बागडाेर सम्हाली रहने अवसर प्राप्त गर्ने प्रम वली ज्यूलाई भाग्यमानी मात्र हैन अहाेभाग्यमानी ठान्नै पर्दछ । ईतिहासकै राजनेता बन्ने अवसर उँहालाई मिलेकाे थियाे । साच्चै भन्नु पर्दा उहाँलाई नेपालीका सन्तान दरसन्तानसम्मले स्तुतिगान सहित जीवनकाे आदर्श र मार्ग निर्देशकका रुपमा स्विकार्दै अध्ययन गर्ने,पुज्ने र प्रार्थना गर्ने गरी ” वलीमाला” तयार गर्ने अवसर मिलेकाे थियाे । तर बिडम्वना त्यसाे अवसर जनआकाँक्षा अनुसार सही अर्थमा सदुपयाेग हुन सकेन । यद्यपि , समय सिमामा अझै पूर्णबिराम लागिसकेकाे छैन जस्ताे लाग्छ । आफ्नाे ६९ आै जन्म दिन जन्मथलाे पुगेर मनाउदै गर्दा प्रमले आफ्नाे सारा बिगतहरु एक एक गरेर स्मरण गर्नु भयाे हाेला नै भन्नेमा म बिश्वस्त छु । लाेभीपापीहरुकाे चाैघेराबाट केही समयका लागि भए पनि उम्किएर यथार्थ धरातल जन्मथलाेमा जन्म दिन मनाउदै गर्दा जीवनकाे समग्र ६८ वर्षकाे यात्राकाे आफ्नै आत्मा साँक्षी राखेर सुक्ष्म समिक्षा गर्र्दै सबल पक्षमा गर्व र दुर्वल पक्षमा आत्मालाेचना गर्नु भयाे हाेला नै । एक भलाे चिताउने नागरिकका हैसियतले याे घडिमा अब उपरान्त सबल पक्षले निरन्तरता र दुर्बल पक्षले पूर्णबिश्राम लिन्छ भन्नेमा म आसाबादी छु । स्मरण रहाेस् कि नेपालकाे ईतिहासले जंगबहादुरलाई निकै शक्तिशाली र तानासाही जहानिया प्रधानमन्त्रीकाे संज्ञा दियाे । तर उनले चाहेकाे भए श्री ५ मात्र हैन मर्यादाक्रममा राजा भन्दा माथि पनि रहन सक्थे तर दुरगामी दृष्टि सहित आफ्नाे र आफ्ना दरसन्तानकाे सत्ताकाे दिर्घायुका लागि श्री ३ मै सिमित रहेका थिए । प्रमकै शब्द सापटी मागेर भन्नु पर्दा उपहार पाएकाे जिन्दगीले हालसम्म प्रश्न चिन्ह खडा हुने ठाँऊ नराखी राजनेता बन्ने शुभ अवसर त चुकायाे नै । तर पनि जन्म दिनका अवसरमा गरिएकाे आत्म समिक्षाले अब भाबी दिनमा जनआकाँक्षा पुरा गर्नतिर केन्द्रित भई सही मार्ग निर्देश गर्न सकाेस् । आउदाे उपहारकाे जीन्दगी पूजनीय, जय जयकार र वावामा बिताेस् । यदि जनताले राखेका बिषेश अपेक्षा पुरा गर्न नसके पनि अब बाँचेकुचेका साख थप गिर्ने भूमिका निर्वाह नहाेस् । मैले फागुन १० गते देखेकाे सपना केवल सपनामा मात्र सिमित रहाेस् । बिपनामा परिणत नहाेस् । देश र जनताका लागि आफ्नाे प्राण आहुति दिने सच्चा सहिदहरुकाे सपना साकार हुन सकाेस् । स्व. ज्याेति भाई जस्ता देश प्रेम र देशभक्तिमा समर्पित मृत आत्माहरुले राजनैतिक ब्यतिथि र बिसंगतिका बिरुद्ध तड्पिदै आन्दाेलित हुन नपराेस् । समृद्धिकाे स्वाद चाख्दै आनन्दकाे अन्तिम सास फेरेर बिदा हुने लालचमा बाँचेका आम नेपालीहरुले प्रमलाई धारेहात लगाएर भड्किन र तड्पिन नपराेस् । प्रमलाई धारेहात लगाउने हातहरु प्रसंसनीय काम र त्यसकाे परिणामका कारण बाध्य भएर जाेडिदै आदर सम्मानका लागि झुकुन् । यिनै र यस्तै अपेक्षाहरु सहित प्रमलाई जन्मदिनकाे शुभकामना ।
शुरु भयो हिमालयन ट्राभल मार्ट, ४१ देशका पर्यटन व्यवसायी नेपालमा
एभरेष्ट पानोरमा रिसोर्ट तीन महिना निलम्बित
प्रधानमन्त्रीको ट्वीट : म त घरभित्र छु, तपाई पनि घरमै बस्नुहोस
यूएइमा थप दुई नेपालीमा देखियो कोरोना, दुई जना भने निको भए
लकडाउन उल्लंघनविरुद्ध प्रहरीको कडाई